ပုဂ္ဂလိကဂျက် Air ကိုပဋိညာဉ်စာတမ်းပျံသန်းမှုလင်ကွန်း, Papillion, မျက်မှောက်, ငါ့ကိုအနီး NE
လင်ကွန်းအနေဖြင့်သို့မဟုတ်အလုပ်အမှုဆောင်ပုဂ္ဂလိကဂျက် Air ကိုပဋိညာဉ်စာတမ်းပျံသန်းမှု, Papillion, la Vista က Nebraska ငှားရမ်းမှုကုမ္ပဏီလေယာဉ်အနီးငါ့ကိုခေါ်ရန် 888-634-6151 နောက်ဆုံးမိနစ်. တချို့လူတွေကသန်းကြွယ်သူဌေးသို့မဟုတ်မြင့်မားသောပျံအမှုဆောင်အရာရှိများထိန်းသိမ်းစောင့်ရှောက်ဝါးအဖြစ်စင်းလုံးငှားဂျက်လေယာဉ်မှတ်နေစဉ်, သူတို့မကြာခဏလင်ကွန်း Nebraska အတွက်အကောင်းဆုံးဇိမ်ခံစားသောက်ဆိုင်များနှင့်ဟိုတယ်များသို့သွားရောက်အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုအနောက်ဘက်အလယ်ပိုင်းနေထိုင်သူများအားဖြင့်အသုံးပြုကြသည်. ခြော, တိုတောင်းသောခရီးပို့ဆောင်ရေး၏နည်းလမ်းအတိုင်းဤလေယာဉ်ပျံများအသုံးပြုခြင်းဆီသို့ဦးတည်ကာတိုးပွားလာလမ်းကြောင်းသစ်ရှိပါတယ်. ဒီတစျခုမှာကြီးမားသောအကြောင်းပြချက်ပုံမှန်စီးပွားဖြစ်ပျံသန်းမှုနှင့်အတူအထွေထွေလူထုကြားတွင်မကျေနပ်မှုဖြစ်ပါသည်. ပုံမှန်အားဖြင့်, ဤအခရီးရေအလွန်ထူထပ်ဖြစ်ကြပြီးအခက်အခဲများနှင့်အတူဝိုင်း, လေဆိပ်သွားလာရန်ဒါအဆင်မပြေဖြစ်လာကြပြီ.
တစ်ဦးကပုဂ္ဂလိကဂျက်လေယာဉ်သည်လေထုစင်းလုံးငှားလင်ကွန်း Nebraska လေယာဉ်တစ်စင်းပျံသန်းဝန်ဆောင်မှုကုမ္ပဏီတစ်ခုပြားချပ်ချပ်အခကြေးငွေကောက်ခံသွားမည်. ဤသည်ကိုအတူတကွခရီးသွားန်ထမ်းသို့မဟုတ်မိသားစုများအတွက်ဤဝန်ဆောင်မှုစံပြစေသည်, သူတို့ဦးခေါင်းကိုနှုန်းအများကြီးလျော့နည်းပေးဆောင်ပါလိမ့်မယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့. ကြီးမားတဲ့မြို့ကြီးများအကြားစီးပွားရေးလုပ်ငန်းအပေါ်မှန်မှန်သွားလာရန်ရှိသည်သူတွေကိုလည်းဤဝန်ဆောင်မှုအပေါ်အမြတ်ထုတ်ရန်နိုင်ပါတယ်, နှင့်အခြားစီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင်များအုပ်စုများနှင့်အတူခရီးသည်လေယာဉ်ခရီးစဉ်စီစဉ်.
ပိုကောင်းနေဆဲ, အသစ်သောနည်းပညာတွေကိုကျေးဇူးတင်, ဒါကြောင့်တတ်နိုင်ဗလာခြေထောက်လေယာဉ်ပျံအငှားဝန်ဆောင်မှုလင်ကွန်း Nebraska ငှားရမ်းရန်ယခုယခင်ကထက်ပိုမိုလွယ်ကူဖြစ်ပါသည်. VLJs (အလွန်အလင်းဂျက်လေယာဉ်များ) ဖွံ့ဖြိုးပြီးပြီ, run ဖို့စျေးသိပ်မကြီးတဲ့သော. ဒါကအကြိမ်ကျယ်ပြန့်ရွေးချယ်ရေးမှာမြောက်မြားစွာလမ်းကြောင်းကမ်းလှမ်းရန်ဂျက်လေကောင်းလေစင်းလုံးငှားကုမ္ပဏီများမှဖွ, စီးပွားဖြစ်လေကြောင်းလိုင်းနှင့်အတူသာသာထိုးထိုးနှိုင်းယှဉ်တဲ့စျေးနှုန်း.
အလုံးစုံ, ထူးဆန်းသောအကြိုးကြေးဇူးမြား၏နံပါတ်ပုဂ္ဂလိကစင်းလုံးငှားဂျက်လေယာဉ်ပေါ်ခရီးသွားလာရန်ရှိပါသည်. ခရီးသွားများအတွက်ရှည်စီတန်းရှောငျနိုငျ, နှင့်၎င်းတို့၏လေယာဉ်ခရီးစဉ်ကိုချွတ်ယူကြောင်းနီးစပ်သည့်အချိန်မှလေဆိပ်မှာဆိုက်ရောက်. စင်းလုံးငှားဂျက်လေယာဉ်များ၏အများစုစီးပွားဖြစ်လေယာဉ်ပျံထက်အရွယ်အစားသေးငယ်များမှာ, စီးပွားဖြစ်လေကြောင်းလိုင်းများခဲပူဇော်ကြောင်းနီးအိမ်သို့ထင်ရှားတဲ့လေဆိပ်ကနေခရီးသွားလာခွင့်ပြု. မကြာခဏ, ဤအပျံသန်းမှုအဖြစ်ကောင်းစွာရည်ရွယ်ဦးတည်ရာမှနီးဆင်းသက်နိုင်ပါတယ်, အများဆုံးအဆင်ပြေ. နောက်ဆုံး, စင်းလုံးငှားဂျက်လေယာဉ်ပေါ်တွင်ခရီးသည်အတှေ့အကွုံစီးပွားဖြစ်ပျံသန်းမှုအပေါ်ထက်ပိုမိုသဟဇာတဖြစ်လေ့ရှိတယ်, တချို့လေယာဉ်ခရီးသိသိသာသာပိုပြီးပျော်စရာစေသာယာအဆင်ပြေမှုများတဲ့အကွာအဝေးရှိသည်.
သငျသညျအတွက်ပျံသန်းနိုင်သည်အနီးဆုံးလေဆိပ် & လင်ကွန်း၏ထွက်, Papillion, မျက်မှောက်, Lancaster, Sarpy, Scott ဖြီးနှင့်ဒါကိုတာကောင်တီ, Nebraska http://www.lincolnairport.com/
လင်ကွန်း, နျဒဲနျး, ဂျန်နရယ်ရို, ဝေါ်လ်တန်, Malcolm, Davey, သာယာသော Dale, Waverly, ရေမွန်, Sprague, Martell, လင်းယုန်ငှက်, Bennet, Hickman, ပန်းကုံး, ပစ်မှတ်, Ceresco, Hallam, Greenwood, ပနားမား, Palmyra, Milford, ကရေတေ, Valparaiso, Firth, Elmwood, ပျား, Seward, Cortland, Unadilla, Ithaca, ဒေါက်ဂလပ်, နောဖမြို့, Ashland, Clatonia, Dwight, Murdock, Dorchester, အဒမ်, Goehner, Weston, Wahoo, Wilber, တောင်ပိုင်းကွေးပါ, Burr, Staplehurst, Manley, Brainard, Beaver အဘိဓါန် Crossing, ဆိုင်းရာကူစ်း, Pickrell, ငိုကြွေးခြင်းရေ, Avoca, Sterling, Mead, de Witt, Gretna, Louisville က, Otoe, ဥတီဂ်, မာလ်မို, မိတျဆှေ, Ulysses, Springfield, မျို, Cordova, အူမကြီး, ပရာ့ဂ်, အာရဇ်ပင် Creek အဘိဓါန်, ဘရူနို, Swanton, ချက်ပြုတ်, Filley, Nehawka, Dunbar မှာ, Omaha-, Waterloo, ကဏန်း Orchard, အံ့သြစရာ, စိန့် Columban, ဒါဝိဒ်သည်စီးတီး, Abie, အနောက်တိုင်း, Plymouth, Lorton, Gresham, Elkhorn, Tecumseh, Rising စီးတီး, ချိုင့်ဝှမ်း, Talmage, Papillion, Milligan, မျက်မှောက်, Tobias, ယောက်ျားလေးများမြို့, Daykin, Bellwood, ဂျွန်ဆင်, ဆတ် Creek အဘိဓါန်